Sida loo Play Google Music offline i
> Resource > Music > Sida loo Play Google Music offline
Google Music waa Jannada music kama dambaysta ah ee Cloud ah. Si kastaba ha ahaatee, qalabka oo dhan oo aan la online soco doonaa 24-7! Sidaa darteed, waa loo baahan yahay mararka qaar inaan annagu awoodno inaan nahay ciyaari Google Music offline .
Play Google Music offline on Android Devices
Play Google Music offline on iPhone / iPad / iPod
Download aad jeceshahay Music Google oo dhan iyo Play Google Music offline mar walba anywhare
Nasiib ayaad haddii aad isticmaalayso telefoonka ah Android ama kiniin. Fadlan eegno qaar ka mid ah tallaabooyinka hoose oo ku saabsan sida ay u ciyaari Music Google marka aad ku xiran oo aan internetka.
1. Waxaad hubisaa in aad ku sugan tahay aragtida saxda ah. On app Music telefoonka aad Android ah, xusho Qaasaali, Artists ama Playlists isticmaalaya bar navigation siman sare ee app. Looxa, waxaad bedelan kartaa views isticmaalaya menu hoos-hoos ee dhinaca kore ee bidix.
2. telefoonka aad Android, taaban button menu iyo dooran Samee offline heli karo . On kiniin, taas menu waa rukun horyaalka midig oo Ilaaha Codsiga bar.
3. Touch pin cirrada soo socda si wax kasta oo aad rabto inuu u ciyaaro offline. Waxaad dooran kartaa waxyaabaha duwan ee hal mar.
4. pin The cirro oo doog ah ku soo jeedin doonaa, sixitaanka in waxyaabaha la offline ciyaari doonaa.
5. Touch qabtay iyo app Music bilaabi doonaa degsado waxyaabaha ay u qalab aad.
1. Waxa kale oo aad taaban karo badhanka menu xagalka ah ee soo socota si ay wax album, artist ama playlist, dooro offline Available in ay soo bixi Google Music qalabka Android aad.
2. biinanka cagaaran Dim muujinaysaa in heeso ama albums wareejiyo ka computer ah.
Tan iyo Google ma sii daayo ciyaaryahan music rasmi ah qalabka macruufka aan, waxaa jira 2 hababka inuu u ciyaaro Google Music offline ku iPhone, iPad ama iPod: Sida ikhtiyaarka ugu horeysay, waxaad kala soo bixi kartaa Google Music in computer ka dibna lagu wareejiyo rogtid oo aad iDevice. Fursada kale waa inaad kala soo baxdo ciyaaryahan music dhinac saddexaad sida gMusic taageera offline loo maqli karo. Haddii aad qabto wax habab kale oo caawiya kartaan user inuu u ciyaaro Google Music offline, waxaad tahay wax ka badan soo dhaweeyay in ay halkan wadaagaan.
Fiiro gaar ah : kaliya ka jaftaa on calaamad xaq-fallaadhiina waxay si wax ku liis iyo soo qaado offline .
Haddii aad soo iibsatay music ah, waxa kale oo aad kartaa download Google Music maktabadda Lugood aad iyo iyaga u hagaagsan in aad iPhone, iPad ama iPod inuu u ciyaaro marka aad xiran oo aan Internet-ka. Waxaa aad u badbaadin doonaa $ dheeraad ah 1,99 ciyaaryahan gMusic.
Sida aad ogtahay, Google waxay bixisaa Manager Music si aad u dejisan Google Music gal kombiyuutarka. Laakiin, sugaan, waxay khuseysaa oo keliya iibsaday songs Google ?! Haa, sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad ogaato sida loo soo dejisan ee Google Music iibsaday rogtid oo aad computer si aad iyaga offline ka heli karaan.
Ka dib markii ay soo degsado music Google si aad u computer, markaas ka dib waxaad isticmaali kartaa Wondershare Player inuu u ciyaaro ama u maamuli lahayd Google music. Waxaad sameyn doonaa ka yar oo wuxuu ku raaxaysan badan oo ay tahay design dareen leh! Waxaad u abuuri karaan iyo abaabulo playlists aad, qaado snapshots, dooran hab ee loo maqli karo iyo wax ka badan waxa la. On si ah in, ay taageerto degree ballaaran ee qaabab file in aan ay taageerayaan ciyaartoyda kale ee suuqa. Waxa kale oo uu bilaabo-up ka dhaqso badan codsi kasta oo kale oo kor u qaadataa DHCP yar iyo sidoo kale shilalka ka yar inta lagu jiro faylasha loo maqli karo.